Andron’ny mpifankatia, tatitra manokana: Fitiavana be avy any Ejypta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Febroary 2009 14:50 GMT
Ity no fotoana iray amin'ny taona izay hanomboanareo hino fa ny fiainana dia saika voninkazo sy sokola . Irery na olon-droa, mpomba na mpanohitra ny andron'ny mpifankatia dia samy tsy maintsy miatrika ny hadalàna ben'ny volana Febroary. Na tia na tsia , ianareo dia tsindrian'ny nonorsa , voninkazo, boaty, ary famonosana fanomezana miloko mena midorehitra tsikaritra eny manodidina anao, raha tsy hiresaka ireo mpiara-miasa aminao izay mila hahalasa adala anao amin'ny fiventesana fandaharam-potoana sy ny fikarakarana atao amin'io andro lehibe io.
Raha sahirana amin'ny fiomanana ny fiombonan'ny mpitoraka blaogy ejyptiana sasany, ny hafa kosa dia mikaon-doha amin'ny fiezahana hitady hevi-baovao sy làlana ho enti-mankalaza ny andro manerantanin'ny fitiavana.
Ao amin'ny lahatsorany, mandinika ny fahafahana handefa ny “speed dating” any Kaira i Super Lili : Miteny izy fa:
“Nieritreritra aho, fa maninona no tsy misy “speed dating” aty Kaira? Tokony ho mora karakaraina io, mila mamaritra ny toerana fotsiny, ka mandoa 100 L.E. ny tsirairay avy, mamoaka fanambarana momba ny hetsika any amin'ny Facebook, dia izay.”
Manohy ihany izy:
“Raha izaho manokana, hevitra tsara izany amiko! voalohany, ny vidina tapakila dia azo hanaraha-maso sahady hoe iza no mety ho tonga, manana 5 minitra ianao handraisana fanapahan-kevitra , ka raha mifankahita amin”Atoa Creepy Creeperson ianao dia mety ho 5 minitra monja no ho laninao miaraka amin-dry zareo. Afaka omenao an'ireo bandy ny adiresy mailakao na adiresy Facebook-nao mba ho fanandramana, na mividy ‘carte sim’ vaovao mba handraisana ireo antso ka afaka arianao iny raha mitontona any amina mpandrahona ianao.”
Amin'ny lafiny iray hafa, nanapa-kevitra i Appy ny hanitatra ny ‘contexte’ ary nanasa ny mpamakiny handray anjara amina hetsika manokana karakaraina ONG iray, “sohbet khier;” izay hotontosaina any amin'ny toerana fanta-daza indrindra ao Egypta, “Istabl Antar”.
“Arahabaina nahatratra ny andron'ny mpifankatia! Hiaina anaty fitiavana foana anie ianao. Mila St Valentin miavaka isika amin'ity taona ity. Te-hiteny amin'ireo izay tsy mankalaza ity andro ity isika fa tena te-hiaraka amin'izy ireo , ary tia azy ireo. Afaka ataontsika izany amin'ny alalan'ilay ONG “Sohbet Kheir”, izay mikarakara andro mahafinaritra mba handrefasana onjam-pitiavana ho an'ireo ankizy sy izay rehetra mipetraka eto amin'ity faritra ity.”
Nanambara ny herinandron'ny fitorahana blaogy momba ny Andron'ny Mpifankatia i Mohaly ary namàrana ny fitantaràny tamina fanolorana tari-dàlana ho an'ireo tokantena mba hanampy azy/azy ireo handia io andro io.
”Rehefa namadibadika ela aho, raha ny hoe handositra, dia niteny irery ho ahy ihany hoe andron'ny mpifankatia io, ary manan-jo hankalaza izany koa ny tokantena, misy lafiny tsara ho anay ao …Na nifidy ny hiara-hankalaza amina olona tokantena hafa koa ianao amin'ny alalan'ny fanaovana ny kilalaon'ny tokantena, na aleonao hionona amin'ny maha-tokantena anao, ny tanjona dia tsy inona akory fa ny hanaovana ny andron'ny mpifankatia amin'ny Sabotsy ho andronao!
Nanao lisitry ny torohevitra hitany tamin'ny aterineto koa izy, ary namarana ny lahatsorany amin'ny toroheviny manokana ho amin'ity andro ity:
“TOHIZO NY NOFINAO (safidin'i Mohaly): Na inona na inona zavatra manintona anao indrindra eo amin'ny fiainana — na fialamboly izany, na dia lavitra(voyage), na vinavinan'asa tànana, na asa fanasoavana, sns. — ampiasao ny anio hanaovana dingan-dava amin'ny alàlan'ny fanatanterahana izany dieny anio. Izany dia fantatra ihany koa ho toy ny firotsahanao an-tsehatra mivantana amin'ny famokarana.… na fanohizana irony zavatra mahafatifaty anao irony. Raha vao hoe zavatra nahasoamadodoka anao no tafavoaka, tena mahatsiaro TRETRIKA ianao mahatanteraka zavatra goavana ao anatin'io fotoana io.”
Manaova Andron'ny mpifankatia mahafinaritra; Enga anie io andro io hahasafononoka ny tsirairay avy amin'ny, hafaliana, voninkazo, sôkôla, ary ambonin'ireo rehetra ireo dia fitiavana sy hafanana.
Hita koa ao amin'ny Global Voices Online:
Sary avy amin'ny: Wikipedia